Uhlelo olusha kwabamakela uMatric | Isolezwe
Uhlelo olusha kwabamakela uMatric
Isolezwe / 10 September 2012, 4:12pm /
ZIZOGAYA ngomunye umhlathi izinto kothisha abamaka amaphepha kaMatric kuleli njengoba bezokhethwa ngokwemiphumela yezivivinyo abazozibhala kulezo zifundo abazifundisayo.
Othisha abazothola ngaphansi kuka-60% kulezi zivivinyo ngeke baze bavunyelwe ukuthi bamake kodwa bazoqeqeshwa, banikwe ithuba lokuthi baphinde babhale lezi zivivinyo ngonyaka olandelayo.
Lolu hlelo kulindeleke ukuthi luqale noma yinini njengoba ingcabha isisemphakathini wakuleli ukuthi uphawule ngalo zingakapheli izinsuku ezingu-14 uma seluqalile.
Izinyunyana zothisha zikhala ngokuthi uMnyango weMfundo eyisiSekelo, oholwa nguNkk Angie Motshekga awuzange uzazise ngalolu hlelo njengoba bekumele luqale kubhungwe ngalo emkhandlwini i-Education Labour Relations Council ngaphambi kokuba kufakwe osopolitiki.
Ngokwe-Government Gazette engunombolo 35631, othisha abazothola kusuka ku-80% kuya ku-100% bazoqokwa ukuba bamake iminyaka emithathu. Ngemuva kwale minyaka bazophinde babhaliswe lezi zivivinyo.
Abathole kusuka ku-60% kuya ku-79% bazokwamukelwa ukuthi bamake kodwa bese beqeqeshwa izinsuku ezintathu ngaphambi kokuba bamake. Njalo ngonyaka bazobhala izivivinyo baze bathole ngaphezulu kuka-80% ukuze banikwe inkontileka yeminyaka emithathu.
Othisha abamakayo bathola kusuka ku-R12 000 ngezinsuku ezibalelwa kweziyishumi abazimakayo. Okhulumela uNkk Motshekga, uNksz Hope Mokgatlhe, uthe bazoqala bacubungule yonke imibono yabantu ngaphambi kokuba baqalise lolu hlelo.
Uthe lolu hlelo luzosiza othisha wathi balwa nokuthi kube nabafundi abangeke baphumelele ngenxa yamaphutha enziwa ngabamakayo. UMnuz Allen Thompson, oyiPhini likaMengameli weNatu, uthe yize bengaphikisani nalolu hlelo kodwa abelweseki.
“Kushiya imibuzo indaba yokuthi uNgqongqoshe ajahe ukufaka le ndaba ePhalamende kunokuthi iye kwi-ELRC lapho ibizobhungwa khona. Indlela othisha abamaka ngayo ayifani ngakho kudingeka abafundi bachazelwe ngale ndlela ngoba basuke beqala ngqa ukumakelwa abantu abangabazi,” usho kanje.
UNobhala Jikelele weSadtu, uMnuz Mugwena Maluleka, uthe bayaluqabuka lolu hlelo basalinde uNgqongqoshe aye kwi-ELRC ayobachazela ngalo.
“Izindaba ezithinta ukushintsha kwezimo zokusebenza kothisha zibhungwa kulo mkhandlu ngakho sisamlindile uNgqongqoshe eze ezosichazela khona,” kubeka uMaluleka.
Umphakathi unamasonto amabili ukuthi uphawule ngalolu hlelo kanti bangathumela ifax ku-012 328 2898.